Maxaa ka dhaqan galay amarkii uu soo saaray Fahad Yaasiin ee ahaa in laga guuro dhismaha Villa Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa ka dhaqan galay amarkii uu soo saaray Fahad Yaasiin ee ahaa...
Maxaa ka dhaqan galay amarkii uu soo saaray Fahad Yaasiin ee ahaa in laga guuro dhismaha Villa Somalia?
Muqdisho (Caasimadda Online)- Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa dhawaan amar uu soo saaray ku faray in 14-maalmood gudahood looga guuro dhismaha madaxtooyada Villa Soomaaliya si dhiso.
Amarka Agaasimaha Madaxtooyada ayaa ku eg maanta oo talaado ah oo taariikhda ay ku beegan tahay 21-bisha Agosto,waxaana soo baxaya warar sheegaya inuusan wali dhaqan gelin amarkaasi.
Amarkan ayaa saameynaya dhamaan dadka degan dhismayaasha Madaxtooyada oo isugu jira Wasaarado, Wasiiro, Xildhibaano iyo Siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay, kuwaasoo degenaa Madaxtooyada 7-dii sano ee u dambeysay.
Wararka laga helayo Madaxtooyada ayaa sheegaya in xubnaha lagu amray inay Madaxtooyada ka guuraan ay muran ka keeneen, su’aalna geliyeen waxa xilligan ku soo beegay amarka, waxaana qaarkood ay dalbadeen in muddo la siiyo.
Sidoo kale Xildhibaano qaar ee degan Madaxtooyada ayaa la sheegay in Madaxweynaha ay dacwad u gudbiyeen, iyagoo ku dooday in tan iyo dowladdii KMG ay degenaayeen, isla markaana aanay jirin cid ku amartay inay guuraan, waxaana qaarkood ay sheegeen in aanay heysan meel ay degaan.
Agaasimaha Madaxtooyada ayaa 6-dii bishan Agosto soo saaray amar uu ku farayo dadka degan Madaxtooyad in muddo 14 maalmood gudahood looga guuro, si loo bilaabo dhiso dhismayaasha qaar oo aan muddo wax dayactir helin, qaarkoodna ku yaalla banaanka Xafiiska Madaxweynaha.